BBC Somali - War - Daawo Aftida Sudan
11 Janaayo, 2011, 17:43 GMT 20:43 SGA
Daawo Aftida Sudan
Codayntii aftida loo qaadayo madaxbanaanida koonfurta Sudan ayaa socota maalintii saddexaad. Labaatan boqolkiiba dadka diiwaan gashan ayaa codeeyay ilaa hadda,saldhigyada codaynta ayaa furan ilaa waqti danbe.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay iska hor imaad ay ku dhinteen ugu yaraan soddon qof gobolka Abyei oo ah gobolka saliida shidaalka laga soo saaro.
Gobolka Abyei ayaa waxaa isku haysta waqooyiga iyo koonfurta Sudan, walina lagama samayn afti inay doonayaan inay ku biiraan koonfurta Sudan iyo inay ku biiraan waqooyiga Sudan.
Wariyaha BBC Bashkas jug soo dhacay oo ku sugan magaalada Juba ee koonfurta Sudan ayaa warbixintan ka soo diray.